MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): August 2012
ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသား မိသားစုများ၏ ကလေးငယ်များ အတွက် ပညာရေး ထောက်ပံ့မှု တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ
မနေ့က ရန်ကုန် အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသား မိသားစုများ၏ ကလေးငယ်များ အတွက် ပညာရေး ထောက်ပံ့မှု တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်... ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ကျတော် click နှိပ်မိတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အားပေးကြပါဦး...
အခုပုံများကို အကျိုးအမြတ် မရည်ရွယ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုလိုပါက လှူဒါန်းပါမည်။ watermark အမှတ်အသား မပါသည်များကို လှူဒါန်းလိုပါသဖြင့် ကျတော့်ကို ဆက်သွယ်ပြီး တောင်းယူကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
My Labels: Rakhine, Myanmar, Burma, Show
Posted by MgHla မောင်လှ at 3:16 pm
မင်းဖြူမှန်မှန်ပြော,aphoto by MgHla on Flickr.
Mingun PaHtooDawGyi,aphoto by MgHla on Flickr.
Adobe Illustrator သုံးပြီး Bitmap Image ကို Vector Image အမြန်ဆုံး ပြောင်းခြင်း
Posted by MgHla မောင်လှ at 3:47 pm
အခု ကျတော် ရေးမယ့် tutorial မှာ ကာတွန်းဆရာ ဆရာအောင်မော်ရဲ့ facebook မှာတင်ထားတဲ့ ဒီနေရာက http://goo.gl/qziO8 ကာတွန်းပုံကို သုံးထားပါတယ်... အဲဒီ ကာတွန်းပုံကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ OriginalCartoon.jpg နာမည်နဲ့ သိမ်းလိုက်ပါတယ်...
၁. အရင်ဆုံး Adobe Illustrator ထဲဝင်ပါ... (ကျတော် Adobe Illustrator CS6 trial version ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်...)
၂. Menu bar ပေါ်က File ထဲက Open နဲ့ OriginalCartoon.jpg ကို ဖွင့်ပါတယ်...
၃. Illustrator ထဲမှာ ပွင့်လာတဲ့ ကာတွန်းပုံပေါ် mouse pointer တင်ပြီး left click ခေါက်ပြီး select လုပ်ပါ...
ပုံဘေး ပတ်ပတ်လည်မှာ အပြာရောင်ဘောင်ရယ်၊ ထောင့်လေးခုမှာ စတုရန်းပုံ သေးသေး ၄-ခုရယ်၊ အနားလေးဘက် အလယ်တည့်တည့်မှာ စတုရန်းပုံ သေးသေး ၄-ခု ပေါ်နေပြီဆို select လုပ်ထားတာပါ...
၄. Menu bar ပေါ်က Object ထဲက Rasterize ကို ရွေးပါ...
၅. ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Rasterize လုပ်မယ့် setting ကိုရွေးပြီး OK ကို click နှိပ်ပါတယ်...
၆. Menu bar အောက်ကပ်ရပ်မှာ ရှိတဲ့ toolbar ထဲက Image Trace ကို click နှိပ်ပါ...
၇. အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း box ပေါ်လာရင် OK ကို နှိပ်ပါ...
၈. ပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း Progress ဆိုပြီး box တစ်ခုပေါ်လာပြီး အလုပ်တွေ လုပ်နေပါလိမ့်မယ်...
ဘာ error message မှ မပြဘဲ အဲဒီ box ပျောက်သွားပြီဆိုရင် ကျတော်တို့ အချုံ့အချဲ့ခံ quality ပိုကောင်းတဲ့ Vector Image ကိုရပါပြီ...
My Labels: Tutorial, Adobe Illustrator, How to convert bitmap image to vector image
ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသား မိသားစုများ၏ ကလေးငယ်မျာ...
Adobe Illustrator သုံးပြီး Bitmap Image ကို Vector...